Justin Lehmiller ၏ "Erectile Dysfunction သည်လူငယ်များတွင်အမှန်တကယ်ရှိနေသည်" (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သုတ်ခြင်း
Justin Lehmiller တစ်ဦး ပုံမှန်ပေးဆောင်ပံ့ပိုးရန် Playboy မဂ္ဂဇင်း, unconvincingly ဒီနှင့်အတူနုပျို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်မြင့်တက် debunk ရန်ကြိုးစား ဧပြီလ 2018 blog post:။ ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ကတည်းက ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် နီကိုးလ် Prause Lehmiller ၏ဘလော့ခ်ပို့စ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းလူငယ်များ၏ ED နှုန်းသည်မပြောင်းလဲကြောင်း“ သက်သေပြခြင်း” အဖြစ်မကြာခဏတွစ်တာတင်ခဲ့သည်။ Ley နှင့် Prause အဆိုအရ၎င်းသည်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။
ဒါဟာ Lehmiller ၏ရင်းနှီးသောမဟာမိတ်ကြောင်းမည်သူမဆိုအံ့သြမနေသင့် နီကိုးလ် Prauseမှာသူမ၏ featured ဘဲလျက် မိမိအဘလော့ဂ်ပို့စ်များ၏အနည်းဆုံးဆယ်ခု။ porn အသုံးပြုမှုကိုအဘယ်သူမျှမပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်များနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ / ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မတည်ရှိပါဘူး: ဤနဲ့တခြား Lehmiller ဘလော့ဂ်များအတူတူပင်မှားယွင်းသောဇာတ်လမ်းများရှည်။ နီကိုးလ် Prause သူမက PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းအတိုင်း, ဖြစ်နိုင် Lehmiller ဆောင်းပါးနောက်ကွယ်တွင်တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ဘဲလျက် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုပြုလုပ်နေစဉ်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းစာရေးသူအားမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ နီကိုးလ် Prause ရှိပါတယ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး နှင့်တစ် ဦး လုပ်။ ပြီးလျှင်, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များအားတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes အတူတူ # 12, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, ဂါယူဆပါသည် #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
Update ကို (ဧပြီလ, 2019): YBOP ရဲ့ဝေဖန်မှုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၌, စာရေးဆရာများလက်တဆုပ်စာကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ YBOP ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ခိုးယူဖို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ (Nicole Prause က ဦး ဆောင်ပြီး Justin Lehmiller & David Ley အပါအ ၀ င်) ။ အသေးစိတ်အတွက်ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု။ သင်အောက်ပါဝေဖန်မှု၌ဤစာမျက်နှာစစ်ဆေးလို့မရပါဘူးတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှာနေနေတယ်ဆိုရင်: porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကိုယင်း၏ချယ်ရီကောက်ယူသည့်အပြင်လူနေမှုလေ့လာမှု၊ ဘက်လိုက်မှု၊ Lehmiller & David Ley သည် SHA ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည်ကိုသတိပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန် xHamster နှင့်အတူပူးပေါင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့.
ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပျောက်ကွယ်သွားစေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Lehmiller ၏လက်တည့်တည့်ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုမီသက်သေအထောက်အထားများကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။
အခါ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပထမဦးဆုံး 1940s အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည် Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့ခဲ့တာကြောင့် 1 ထက်လျော့နည်း% 30 နှစ်ပေါင်းထက်ယောက်ျားအငယ်၌၎င်း,3ထက်လျော့နည်း% သူတို့အား 30-45 ၌တည်၏။ လုလင်တို့သည်ပေါ် ED လေ့လာမှုများ, ဒီ 2002 အတော်လေးကျဲနေမြဲနေစဉ်6အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးလေ့လာမှု Meta-analysis သည် အဆိုပါ5၏640 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED နှုန်းထားများခဲ့ကြသည်အစီရင်ခံကြောင်းအစီရင်ခံ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2%။ အဆိုပါ 6th လေ့လာမှု 7-9% ၏ကိန်းဂဏန်းများကဖော်ပြခဲ့သည်ပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့မေးခှနျးကို5သည်အခြားလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုအကဲဖြတ်နှိုင်းယှဉ်မရနိုင်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရန်ဘူး ရှည်ကြာသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှု "ဟုမေးသင်သည်အမှုရောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိခဲ့ ဘယ်အချိန်မဆို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်? "(သို့သျောလညျးဒီကိုက်ညီမှုလေ့လာမှု Lehmiller တာဝန်မဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အသုံးပြုတဦးဖြစ်ပါသည်။ )
2006 ရဲ့အဆုံးမှာအွန်လိုင်း porn လောကီသားတို့သည်အပြောင်းလဲသွားတယ်။ အခမဲ့, streaming porn ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များအွန်လိုင်းသို့ရောက်လာသောနှင့် instant လူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ ဤ အခြေခံကျကျ porn စားသုံးမှု၏သဘောသဘာဝကိုပြောင်းလဲ။ သမိုင်း၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ကြည့်ရှုအသစ်သောပစ္စည်းမှကိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်သို့မဟုတ်မဆိုချောင်းမြောင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session တစ်ခုအတွင်းမှာလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုလွန်ကဲပစ္စည်းမှအရှိန်မြင့်လာတယ်။
2010 ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖေါ်။ ဤသူကားအ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)။ အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ 10% ကနေ 40% အရွယ်ရှိနေစဉ် 14 လေ့လာမှုများမှာတော့ 37 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ နုပျို ED နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမ variable ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးကနောက်ဆုံး 2006-10 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီ streaming porn (20) ၏ထွန်းကားထက်အခြား (ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းကိုချဖြစ်ကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု 20 ကတည်းကတက်သာ 40%, အထီး 4-1999 အတွက်အဝလွန်နှုန်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည် - ဒီလေ့လာမှုကိုတွေ့မြင်).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်မကြာသေးမီခုန်ကျော်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်အတူတိုက်ဆိုင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖို့ "porn စွဲ" နှင့်အောက်ပိုင်း arousal ချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများ။ သတိပြုရန်အရေးကြီးသည် ပထမဦးဆုံးအ7လေ့လာမှုများ စာရင်းတွင်ဆန္ဒပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, Lehmiller ဒီသုတေသနမဆို၏တည်ရှိမှုအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 130 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အောင်မြင်စွာကုသ, porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကိုဝန်ခံနှင့်သူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မလုပ်ခြင်းများဖြစ်စေ၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အိပ်ခန်းအားအပူမပေး။ လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကလိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်မှုလျော့နည်းစေသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အထီးပါဝင်သောအားလုံးလေ့လာမှုများ ဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ (ရသောလေ့လာမှုအများစုဖြစ်ပါတယ်) ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများလက်တဆုပ်စာကြားနေ (သို့မဟုတ်ပိုကောင်း) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှအမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုပတျသကျနေစဉ်, အများစုမှာအများဆုံးရှိသည်မဟုတ်။ ၏ဤစာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအစီရင်ခံအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးပါဝင်သော 45 လေ့လာမှုများကျော်.
လက်၏ Lehmiller ရဲ့လှည့်
Lehmiller ဂရုတစိုက် ED နှုန်းထားများအမြဲ 18 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ 8% ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပြီသောစာဖတ်သူကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက် 40 နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ကွဲကွာဒေတာနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုတိုက်ဆိုင်လေ့လာမှုများ, ကိုရှေးခယျြ:
1) က 1992 ကနေ "လမ်းသောအရာတို့ကိုလေ့လာမှုခဲ့ကြသည်" ဟုမေးသောတစျခုဖွစျသညျ: "သင်သည်အမှုရောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိခဲ့ ဘယ်အချိန်မဆို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်? "ဤမေးခွန်းကိုမှဟုတ်၏နှုန်း 7-9% အကြားခဲ့ကြသည်။
ဆနျ့ကငျြ 2), ဒီ (NATSAL ထံမှ) 2010-12 ဒေတာနှင့်အတူ "ခေတ်သစ်လေ့လာမှု" ဟုမေးသောတစျခုဖွစျသညျ ယောက်ျားဒုက္ခတစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရှိမရှိ ဘို့aသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလကာလ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကာလအတွင်း။ " ဒီလေ့လာမှုကအသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းယောက်ျားလေးများတွင်အောက်ပါလိင်ဆက်ဆံမှုပြproblemsနာများဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Lehmiller သည်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုအမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူများအတွက်“ အကျဉ်းချုံး” ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤအ data တွေကိုကွဲပြားခြားနားသောအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိစုဆောင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်မေးခွန်းအသုံးအနှုန်းကွဲပြားသော်လည်း, ကကိန်းဂဏန်းများဒေတာ 20 နှစ်ပေါင်းဆိတ်ကွယ်ရာစုဆောင်းခဲ့စဉ်းစားနေကြသည်ကိုဘယ်လိုဆင်တူသပိတ်မှောက်ထားပါတယ်။ ဒါကဖြစ်ကောင်း ED ၏နှုန်းထားများအပြီးလူငယ်တွေအားလုံးကိုလူတို့တွင်မြင့်တက်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
Justin ကိုဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော်မေးခွန်းများသည်“ ကွဲပြားခြားနားသောစကားလုံးများ” မဟုတ်ပါ; သူတို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ 1992 လေ့လာမှုရှိမရှိမေးတယ် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သင်တန်းကိုကျော်မဆိုအမှတ်မှာသင်သည်အမှုရောက်သောကြောင့်တက်လာပြီခဲ့။ ၎င်းတွင်သင်သည်အရက်မူး၊ ဖျားနာခြင်း၊ သုံးကြိမ်မြောက်တကြိမ်လှည့်လည်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ၇-၉% ပဲကြည့်ရတာအံ့သြမိပါတယ် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်,7လေ့လာမှု၌သင်ရှိခဲ့ရှိမရှိမေးတယ် persistent ပြဿနာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ သုံးလသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့ကာလအတွင်း။ ဤသည် 16-21 တစ်နှစ်ကြားရှိမဟုတ်ဘဲယောက်ျား 39 နှင့်အောက်တွင်ဘို့ပဲ!
ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တ ဦး လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ Justin Lehmiller သည်“ သိပ္ပံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း” သည် Buzzfeed အဆင့်ရှိ clickbait ဖြစ်ပြီးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာသတင်းစာပညာမဟုတ်ပါ။
သင်တို့မူကားမမေးစေခြင်းငှါအဘယျကွောငျ့ 8 ကတည်းကထုတ်ဝေ 2010 သည်အခြားလေ့လာမှုများအတွက် 2012-14 လေ့လာမှုမှာ 37% ပတ်သက်. ED နှုန်းထားများဖြစ်ကြသေး 9-2010%?
8% ဟာညွှန်ပြမယ်လို့အဖြစ်ပထမဦးစွာ 8%, အရေးမဟုတ်ပါဘူး 600 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ 800% -40% တိုး။
ဒုတိယအချက်မှာ က 40 အောက်တွင်လူတို့သညျမဟုတျပေ - က 16 တစ်နှစ်ကြားရှိမှ 21 ခဲ့ ဒါကြောင့်နီးပါး အဘယ်သူမျှမ သူတို့ထဲကနာတာရှည် ED ရှိသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ 1940s ခုနှစ်, Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့ခဲ့တာကြောင့် 1 ထက်လျော့နည်း% 30 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ယောက်ျားအတွက်,
တတိယအချက်အမည်မသိစစ်တမ်းများအလုပ်သောအခြားအ9လေ့လာမှုများနှင့်မတူဘဲ, ဒီလေ့လာမှုကိုအသုံးပြု In-အိမ်မှာအင်တာဗျူးရင်ဆိုင်ဖို့မျက်နှာ။ (ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်မြီးကောင်ပေါက်များသည်အပြည့်အ ၀ မရောက်ရှိနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ )
အဆိုပါလေ့လာမှုအကြားယင်း၏ data ကိုစုဝေးစေ သြဂုတ်လ 2010 နှင့်စက်တင်ဘာလ, 2012။ အောက်မှာ-25 ED အတွက်သိသာထင်ရှားသောမြင့်တက်သတင်းပို့လေ့လာရေးပထမဦးဆုံး 2011 အတွက်ထင်ရှား။ , 25-and အောက်မှာ sujects အစီရင်ခံစာအပေါ်ကိုပိုမိုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများကပင်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်း (ဒီတွေ့မြင် ကနေဒါဆယ်ကျော်သက်အပေါ် 2014 လေ့လာမှု).
အဆိုပါအသုံးပြုသောအခြားလေ့လာမှုအတော်များများ IIEF-5 ရိုးရှင်းသောဆန့်ကျင်အဖြစ်တစ်စကေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကဲဖြတ်ရန်အရာသို့မဟုတ် IIEF-6, ဟုတ်ကဲ့ or အဘယ်သူမျှမ (လွန်ခဲ့သော ၃ လအတွင်း) Lehmiller ၏ချယ်ရီကောက်စက္ကူတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများအတိအကျတူညီမေးခွန်းလွှာသုံးပြီး: 2001 vs. 2011 (GSSAB)
ဒီခေါင်းစဉ်ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ, က (ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးမြှင့်) ကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့နမူနာသုံးပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ED နှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦးအစွန်းရောက်မြင့်တက်ပြအရှိဆုံး irrefutable သုတေသနအချို့မှာကြည့်ဖို့ကောင်းစွာလိမ့်မည်။ လူအပေါင်းတို့သည်မှအုပ်ချုပ်ခွင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေ့လာမှု (GSSAB) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. တူညီသော (Yes / No) မေးခှနျးကိုသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် 13,618 နိုင်ငံများတွင် 29 လိင်တက်ကြွယောက်ျား။ ဒါက 2001-2002 အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဒီအချိန်ကာလအတွင်းယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲ။ ကောင်းပြီ၊ အဓိကအပြောင်းအလဲများမှာအင်တာနက်ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း (နောက် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် streaming porn ကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်စမတ်ဖုန်းများ) အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ခရိုအေးရှား၊ နော်ဝေနှင့်ပေါ်တူဂီတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင်ပေါ်တူဂီ၌ ED နှုန်းနိမ့်ဆုံးနှင့်နော်ဝေလူမျိုးများသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အင်တာနက်ထိုးဖောက်မှုနှုန်း ပေါ်တူဂီအတွင်းကနော်ဝေတွင် 67% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသာ 95% ရှိကြ၏။
အားဖြင့်အလုပ်မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူများ, Playboy, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ပြုမူဆက်ဆံသူကို
Justin Lehmiller အစီအစဉ်ကို ဦး ဆောင်သည့်လိင်ပညာရှင်အနည်းငယ်နှင့်အသင့်အတင့်ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်းသူသည်အမျိုးသားများနှင့်ဆက်ဆံသောပညာရှင်များနှင့်အလွန်အလှမ်းဝေးနေသည်။ YBOP သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်ပေါ်မှစတင်ပြီးကတည်းကလိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကုသသောလိင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ ၁၄၀ ကျော် (ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပါမောက္ခများ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်များ၊ စိတ်ရောဂါပညာရှင်များ၊ မှတ်ချက် - အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်း၏နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဖရင့်၌ဆီးချိုရောဂါပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အထောက်အထားကိုနှစ်ကြိမ်တင်ပြခဲ့သည်။
ဆောင်းပါးများ, ထုတ်လွှင့်ရေဒီယိုရှိုးများ, နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (အချိန်နဲ့တပြေးညီနိုင်ရန်အတွက်) ၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုတဲ့သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်ကြောင်း, podcasts များစာရင်း:
မျိုးဆက်လာသောသေတ္တာ: Porn စွဲငါ့ကိုအလုပ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သာရာပေမယ့် '' ပုံမှန် '' မိန်းကလေးများနှင့်အတူအိပ်ရာထဲမှာလာသောသေတ္တာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဂျက်ဖ် Foster, MD (2019
ရုရှားစိတ်ပညာပါမောက္ခ Sam Vaknin မှ Porn သည်လိင်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့သလဲ